Golden TV मनोरन्जन Archives -
भारतको प्रतिबन्धपछि पाकिस्तानी नायिकाले भनिन् : निक्कै डराएकी छु
May 18, 2021 Janga Tamang
काठमाडौं। पाकिस्तानी नायिका माहिरा खानले भारतमा पाकिस्तानका कलाकारले काम गर्नबाट प्रतिबन्ध लगाएपछि निक्कै डराएको बताएकी छिन्। उनले चलचित्र ‘रइस’ मा बलिउड नायक साहरुख खानसँग काम गरेकी थिइन्। उनले अब के…
जनवादी गायिका निर्मला घिसिङको स्वरमा ‘मेरी आमा’
May 15, 2021 Janga Tamang
काठमाडौं। जनवादी गायिका निर्मला घिसिङको स्वरमा रहेको ‘मेरी आमा’ गीत सार्वजनिक भएको छ। सन्तानप्रति आमाले निभाउने गौरवमय जिम्मेवारीको बखान गीतमा छ। शब्द र संगीत वामपन्थी नेता तथा जनवादी कलाकार माइला…
‘तिम्रो चोली’मा सौरभ तामाङ र उर्मिला योञ्जन
May 12, 2021 Janga Tamang
काठमाडौं। गायक किरण भुजेल र प्राश्ना शाक्यको संयुक्त गायनमा रहेको ‘चोली तिम्रो’ बोलको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ। गीतमा शब्द प्रेम रामदामको छ। संगीत पनि उनकै छ। गीतको संयोजक फणिन्द्र…
मायाँ बैगुनी सार्वजनिक
Apr 28, 2021 Janga Tamang
काठमाडौं।अमेरिकामा छायांकन भएको ‘माया बैगुनी’ बोलको म्युजिक भिडियो डिजिटल बजारमा सार्वजनिक भएको छ। गीतमा शब्द र संगीत चर्चित संगीतकार वसन्त सापकोटाको रहेको छ। गीतमा सुदिप सागरको संगीत संयोजन रहेको छ।…
‘यमुनादेवी बैजनाथ भट्टराई स्मृति साहित्यिक पुरस्कार’ केरुङ र समथिङलाई
Apr 2, 2021 Janga Tamang
काठमाडौं। ‘यमुनादेवी बैजनाथ भट्टराई स्मृति साहित्यिक पुरस्कार’ बाट नाट्यकर्मी सागर केरुङ पुरस्कृत भएका छन्। पुरस्कृत केरुङले नगद पाँच हजार रूपैयाँ र सम्मान पत्र प्राप्त गरे। ‘यमुनादेवी बैजनाथ भट्टराई स्मृति प्रतिष्ठानले…
तस्बिर २–ओ ! प्रिया’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौँ। गायिका निशा कंडेलले नयाँ गीत ‘तस्बिर २–ओ ! प्रिया’ को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन्। रोमान्टिक भर्सनको गीतमा उनलाई गायक अमन प्रधानले स्वरमा साथ दिएका छन्। तस्विर बोलको निरन्तरता…
‘ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडल–२०२१’ का विजेतालाई दुई लाख
Mar 31, 2021 Janga Tamang
दोहा – गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, मध्यपूर्व क्षेत्रीय युवा विभागले ‘ग्लोबल एनआरएन सिङ्गिङ आइडल’ सेकेन्ड जेनेरेसन – २०२१’ को पहिलो सिजन आयोजना गर्ने भएको छ । प्रवासमा बसेर…